Eyona ndawo intle kunye nexabiso eliphantsi le-aquariums, yeyiphi oza kuyithenga ngo-2022? | Ngeentlanzi
Xa singena kwihlabathi lee-aquariums kunyanzelekile ukuba ube nezinto ezilungileyo I-Aquarium oko kusenza ukuba sikhathalelwe ngokuchanekileyo iintlanzi. Ukongeza, uzama ukufumana into ephambili, ngamanye amaxesha ulibale ngabantu abaninzi: umhombiso kunye nobuhle. Ke ngoko, i-aquarium kufuneka ibe neempawu ezithile ezihlangabezana neemfuno eziyimfuneko ukuze, ukongeza ekubeni nakho ukukhathalela ngokufanelekileyo iintlanzi zethu, isebenza ukuphucula umhombiso kunye nokuzisa ubuhle kuloo ndawo ubeka kuyo.
Kule nqaku siza kukubonisa ukuba yeyiphi indawo ekufanele ukuba ibe nayo kunye nezinye iimodeli ezinokuthi zithathwe njengesalathiso ukuba ungomnye wabo baqala kweli hlabathi.
1 Eyona aquariums intle
1.1 Ikhithi yeTetra AquaArt
1.3 Ikhithi ye-Aquarium yaseLwandle
1.4 Ikhithi ye-Aquarium yeFluval
2 Yintoni omele uyiqwalasele xa uthenga i-aquarium
2.1 Izinto zokubumba
2.2 Izixhobo zibandakanyiwe
3 Iindidi zee-aquariums
3.1 Amanzi amancinci amancinci
3.2 Ii-aquariums ezinkulu
3.3 Amanzi olwandle
3.5 Ixabiso eliphantsi
I-Tetra Starter Line ye-LED ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Tetra AquaSafe 500 ml ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Ithemometha kaMealth ... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Umhlaza uqala nge... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Kavolet Mini Bomba de... Bona amanqaku Jonga umnikelo
Okona kulungileyo	I-Tetra Starter Line ye-LED ...
Umgangatho wexabiso	Tetra AquaSafe 500 ml ...
Oyintandokazi yethu	Ithemometha kaMealth ...
Umhlaza uqala nge...
Kavolet Mini Bomba de...
Ikhithi yeTetra AquaArt
I-Tetra AquaArt Kit ye ​​...
Yimodeli ye-aquarium ethi yakhiwe ngeglasi ekumgangatho ophezulu. Inomthamo opheleleyo weelitha ezingama-60 zamanzi. Imilinganiselo yale aquarium ayi-61 x 33,5 x 42,7 cm. Inesembozo esomeleleyo esine-tube ye-fluorescent ehlala ixesha elide. Kuba iglasi eyakhiwe ngayo ineemilimitha ezi-5 kuphela ubukhulu, ayibangeli kugqwetha xa ujonga ingaphakathi ngaphandle. Ngobunzima buninzi ngokwaneleyo ukukhusela iintlanzi zethu kwaye zibanike indawo yokuhlala elungileyo.
Inokhetho olukhulu lokuvula lweentlanzi. Ukongeza, ngezi ndawo zivulekileyo unokufikelela kuzo zonke izixhobo zobugcisa ngendlela elula. Inayo neekhatriji ezimbini zokucoca amanzi endaweni yazo ukuze ihlale icacile ngekristale kwaye ineempawu ezintle. Ungayithenga ngokuchofoza apha.
Imodeli ye-aquarium inesistim sokucoca indalo. Itanki lakho linecebo lokucoca ulwelo oluphezulu olusebenza ngaphezulu. Esi sihluzo siyakwazi ukucoca ukungcola okuhle kunye nokucoca umgangatho wamanzi. Intlanzi kufuneka zibenamanzi asemgangathweni ngalo lonke ixesha ukunciphisa umngcipheko wokosuleleka nokusasazeka kwezifo.
Ukukhanyisa kwalo olu hlobo lwe-LED ephezulu yokusebenza. Luhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe ngombala kwaye unombane ophantsi oza exhotyiswe ngeplagi. Inezenzo zokonga amandla ukunciphisa iindleko zolondolozo kunye nokunceda ukukhusela okusingqongileyo. Ngokubhekisele kwimpompo yecebo lokucoca ulwelo, ine-oxygenation elungileyo enesantya sokuhamba ukuya kuthi ga kwi-250l / h kwaye inetyhubhu yomoya.
Yi-aquarium encinci encinci enomthamo opheleleyo we-7 yeelitha zamanzi kunye nobukhulu be-23x16x27.5 cm / 9 x6.3 × 10.8cm. Ukuba ufuna ukufumana imodeli enje, cofa apha.
Ikhithi ye-Aquarium yaseLwandle
UMarina 15256-Ikhithi ye ...
Itanki leentlanzi lenziwe ngeglasi. Inefilitha yohlobo lobhaka ecekeceke kakhulu enenkqubo yotshintsho lwecartridge ngokukhawuleza. Ngale ndlela asizukubenzima ubomi bethu ngalo lonke ixesha kufuneka sitshintshe isihluzo samanzi. Ngokwesiqhelo kukho umbono omnandi kakhulu ongaphakathi kunye nokukhanya kwawo kukuhlala ixesha elide. Olu hlobo lokukhanyisa lunefuthe lokukhanya kwendalo.
Umnatha wenziwe ngombala ocolekileyo nothambileyo. Le yindlela onokuzikhusela ngayo iimpiko ezintle zentlanzi yakho. Imilinganiselo yale aquarium ingama-51.3 "x 26" x 32.8 "phezulu. Ukuba ufuna ukuthenga le aquarium cofa apha.
Ikhithi ye-Aquarium yeFluval
Ikhithi ye-Aquarium yeFluval ...
Kubo bonke abo baqhubele phambili kwihlabathi lezinto zokuzonwabisa ze-aquarium okanye abo banebhajethi enkulu, sibonisa le modeli ye-aquarium ephucukileyo. Inomthamo wama-95 eelitha zamanzi kunye nenkqubo yokuhluza eyakhelweyo. Inkqubo yokuhluza isebenza ngokuchukumisa kanye. Ukukhanya kwayo kukuhlala ixesha elide kwaye kunamandla angama-7500 K, 12 W.
Ukugcinwa kwe-Aquarium kwenziwa kwimizuzu nje eli-10. Icebo lokucoca ulwelo ngaphakathi linokuba nenqanaba lokuhamba kwamanzi elingu-560l / h. Ngolu hlobo lwe-aquarium sinokulibala uloyiko lokuqala xa ufaka ii-aquariums kuba beza baxhotyiswa ngeikiti ezinofakelo olulula. Ungathenga le modeli ngokunqakraza apha.
Yintoni omele uyiqwalasele xa uthenga i-aquarium
I-Aquariums zizinto, ekuhambeni kwexesha, eziwohloka kwaye kufuneka zitshintshwe. Enye yezona zinto ziphambili ekufuneka sijongile xa uthenga i-aquarium zizinto zokuvelisa. Kuya kufuneka ujonge ukumelana okanye ixesha lokuphila. Izinto ezilungileyo ze-aquarium zezi ezo zenziwe ngeglasi, izinto ze-acrylic okanye iiplastiki ezinganyangekiyo. Ezi zinto zikumgangatho olungileyo kwaye akunzima ukuzicoca kwaphela. Ngale ndlela, asiyi konakalisa i-aquarium ngobungakanani obukhulu ngemisebenzi yolondolozo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, omnye wemisebenzi ye-aquarium ayikokugcina iintlanzi zethu zisempilweni kuphela, kodwa kukuhombisa nokongeza ubuhle kwindalo esingqongileyo. Ke ngoko, kubalulekile ukuba ujonge izixhobo ezifakwe kwi-aquariums ukonga utyalomali lwexesha elizayo kwizihombiso.
Obona bungakanani bunokubunikezelwa yi-aquarium ngokomthamo wamanzi Kumele ukuba ilingane nenani leentlanzi esifuna ukuba nazo ngexesha elinye. Kufuneka sijonge kwaye sazi iintlobo zeentlanzi esizikhathaleleyo kuba nganye iya kuba neemfuno ezahlukeneyo. Ayisiyiyo kuphela inani leentlanzi elibalulekileyo kodwa indlela abaziphethe ngayo ikwangumbandela omiselweyo xa kufikwa ekufumaneni itanki leentlanzi ngomthamo omkhulu okanye omncinci.
Ukugcinwa kwetanki lethu leentlanzi kubalulekile xa kufikwa kumba wokunikezela ixesha ngeveki. Ukuba i-aquarium icwangciselwe ukwenza imisebenzi yokucoca ibelula Songa ixesha, izinto zokucoca kwaye sinxiba i-aquarium encinci, yenza ubomi bayo benkonzo bude.
Ukuba siza kukhathalela iintlanzi ezimbalwa kwaye ezingadingi indawo enkulu yokuhlala, sinokukhetha ezo ntlobo zamanzi amancinci. Ezi aquariums zigcina amanzi amancinci kwaye kulula ukuwagcina. Inceda nakwiindleko ezisezantsi.
Kwelinye icala, ukuba siza kuhlala inani elikhulu leentlanzi ngaxeshanye, kufuneka sibe nomthamo omkhulu wamanzi. Ukuba injongo yethu kukunyusa ubuhle, kunokuba ngumdla wokwazisa ngezityalo kunye nezinye izinto zokuhombisa kwi-aquarium. Kule nto, kubalulekile ukuba umthamo wamanzi mkhulu, ke sinomdla wokufumana uhlobo olukhulu lwe-aquarium.
Kukho iindidi ezahlukeneyo zamanzi ngokuxhomekeka kuhlobo lwamanzi aza kongezwa. Ukuba sijongana neentlanzi zolwandle siyakufuna amanzi anetyiwa. Kolu hlobo lweentlanzi siya kufuna i-aquarium yaselwandle. Zonke izinto ezikule tanki ziya kulungelelaniswa namanzi anetyuwa.
Ukuba ekhaya sifuna indawo ethile kwi-aquarium kwaye asinayo enye indawo yokuyibeka, kunokuba ngumdla ukufumana i-aquarium enefanitshala. Umanyano phakathi kwefanitshala kunye ne-aquarium. Singayifumana ifanitshala kwindawo efanelekileyo kwaye sineedrowa zokugcina izinto ezantsi nje kwetanki leentlanzi. Singazisebenzisa ezi drawer ukugcina izinto zokugcina.
Ukuba asazi ukuba umhlaba wee-aquariums yinto yethu, kungcono ukuba singatyali imali eninzi ekuqaleni. Ngale nto, kunomdla ukukhangela phakathi kweyona ndlela yexabiso eliphantsi ye-aquariums. Batyekele ekubeni neempawu ezimbalwa kunye nomgangatho omncinci, kodwa basenokwanelisa iimfuno zentlanzi kwaye unike umhombiso olungileyo, okoko nje sitsala ingcinga yethu.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga neendawo zasemanzini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Amanzi olwandle